‘सबै संघसंस्थाले दिनको १५ मिनेट समय दिए १० हजार सदस्य बनाउन सम्भव छ’ शेरबहादुर सुनार, उपाध्यक्ष एनआरएनए युके | We Nepali
२०७५ असोज २१ गते १६:२४
एनआरएनए युकेको वर्तमान कार्यसमितिले १० हजार सदस्य बनाउने महत्वाकांक्षी योजना अगाडि सारेको छ र यसको संयोजनको जिम्मा उपाध्यक्ष शेरबहादुर सुनारलाई दिएको छ । युकेमा एक लाखभन्दा बढी नेपाली बसोबास गरेको बताइए पनि एनआरएनमा त्यसको १० प्रतिशत पनि सदस्य बनेको रेकर्ड छैन । प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा उनीसित वीनेपालीले गरेको संक्षिप्त वार्ता :
एनआरएनए युकेले १० हजार सदस्य बनाउने योजना कहाँ पुग्यो ?
हाम्रो भर्खरै पत्रकार सम्मेलन सकिएको छ । यतिबेला नेपालीहरु समरका कारण ब्यस्त भएको हुँदा मैले नोभेम्बर र डिसेम्बरमा हरेक क्षेत्रमा पुग्ने विचार र योजना राखेको छु । हरेक संघसंस्था र व्यक्तिहरुलाई मेरो अनुरोध छ हामी युकेमा धेरै संघसंस्था छौँ ती संघसंस्थाले धेरै समय दिन पर्दैन दिनको १० देखि १५ मिनेट समय दिनुभयो भने पनि हामीलाई अर्को अधिवेसनसम्ममा १० हजार सदस्य सहजै पुरयाउन असजिलो छैन । त्यसैले म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु जतिबेला चुनाव आउँछ त्यतिबेलामात्र पदको होडबाजी गरेर सदस्य बन्ने परिपाटी अब नहोस् । समयमै सदस्य बनौँ र सही प्रतिनिधि चुनौँ । किनभने हामीलाई यो धेरै पहिलेदेखि अनुभव हुँदै आएको छ कि हामीलाई यसले नकारात्मक कुरा सिकाएको पनि छ । त्यसैले वर्तमान कार्यसमितिले समयमै १० हजार सदस्य बनाउने योजना ल्याएको हो ।
सदस्य बनाउन कहाँ कहाँ जानुहुन्छ ?
सर्वप्रथम यो कार्यक्रम नोभेम्बरबाट शुरु हुन्छ । स्वीण्डनमा हुन्छ, वेल्समा हुन्छ । नर्दन आयरल्याण्ड, प्लमस्टिड, ह्यारो, अल्डरसट लगायत नेपालीहरुको बसोबास रहेको क्षेत्रमा जान्छु ।
कतिपयले तपाई आफैँ आगामी कार्यकालमा उठ्नका लागि यो अभियान ल्याइएको हो भन्छन् नि ?
मैले अघि नै भनिसकेँ यो मेरो लागि होइन । हाम्रो उद्देश्य दुई लाख नेपालीको संस्था मजबुत बनोस भन्ने हो । संस्थागतरुपमा हामी अगाडि बढ्न सकौँ भन्ने हो । हामी १० देखि २० हजार सदस्य बन्यौँ भने हाम्रा अग्रजहरुको युकेमा नेपाल हाउस बनाउने सपना पनि पूरा हुनेछ । मेरो अनुरोध छ, यो अभियान मेरो लागि होइन गैरआवासीय नेपाली संघको लागि हो ।
एनआरएनए युकेको आगामी अधिवेसनमा तपाईको अध्यक्षमा दाबी रहन्छ कि रहँदैन ?
उपाध्यक्ष पछि जाने त अध्यक्षमा हो तर अहिले म त्यो भन्न सक्दिनँ । त्यतिबेलाको समय र परिस्थितिले नै त्यो तय गर्नेछ । युकेमा रहेका गैरआवासीय नेपालीले भन्ने र रोज्ने कुरा हो । मैले एक्लैले मात्र हुन्छु भनेर हुने कुरा होइन । समयले नै बताउने छ ।